Home / समाचार / गूल्मीमा अर्को भयंकर दुर्घटना १८ जनाको मृत्यू ! भिरमा अड्केको शब निकालिँदै
गूल्मीमा अर्को भयंकर दुर्घटना १८ जनाको मृत्यू ! भिरमा अड्केको शब निकालिँदै 0
टवलबाट गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास आउँदै गरेको माइक्रो गुल्मीको बिरवासमा दुर्घटना हुँदा ९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सोमबार बिहान तम्घासका लागि छुटेको बा४ख ५५०१ नम्बरको माइक्रो गुल्मीदरबार गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा दुर्घटनामा भएकत्त थियो ।
दुर्घटनामा ९ जनाको मृत्यु भएको र ८ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक अनुरागकुमार द्धिबेदीले जानकारी दिए ।
बुटवलबाट १३ जना यात्रु लिएर तम्घासका लागि छुटे पनि बीच बाटोबाट गाडीमा यात्रु थपिएको प्रहरी जनाएको छ ।
दुर्घटनामा ६ जनाको घटनास्थलमै,दुई जनाको उपचारका लागि अस्पताल लैजादै गर्दा र एक जनाको उपचारका क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरुमा तीन जना महिला र ६ जना पुरुष रहेका छन् ।
मृत्यु हुने मध्ये ४ जनाको सनाखत भएको छ । सनाखत हुनेहरुमा गुल्मी रेसुङ्गा नगरपालिका-८ मा पसल गर्ने सुमित्रा दर्लामी, अर्घाखाँची भगवतीका बिष्णु पाण्डेय र चालक भमि घर्ति, अर्जै गुल्मीका लालबहादुर मुखिया रहेका छन् ।
गाडीका चालकको पनि पाल्पा लैजाने क्रममा मृत्यु भएको हो । सनाखतको लागि शव जिल्ला अस्पताल गुल्मीमा ल्याइएको गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अर्यालले जानकारी दिए ।
यस्तै घाइते हुनेहरुमा एक जना महिला, ५ जना पुरुष र २ जना वालक रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
गाडीमा सवार चालक सहित १७ जना रहेका थिए ।
जीपलार्इ साइड दिदा दुर्घटना
दुर्घटनामा परेको गाडी सड्कबाट करीव ३ सय मिटर भन्दा बढी तल खसेको थियो । गाडीको तीब्र गति र गाडीलाई साइड दिने क्रममा दुर्घटनामा परेको घटनास्थल पुगेका सशस्त्र बल गुल्मका गुल्मपती प्रेमप्रकाश सिग्देलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार साइडदिने बलेरो जीप सड्कको नालीमा रहेको बताए । दुर्घटना स्थल ठूलो भिर र साघुरो बाटो रहेको छ ।
अपडेटः उदयपुरमा सुमो दुर्घटनामा मृतकको संख्या ९ पुग्यो
उदयपुरमा सुमो जीप दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुगेको छ। दुई जनाको उद्दार गरिएको छ ।
कटारीबाट ओखलढुंगा सदरमुकाम जाँदै गरेको ना १ ज ३४०४ नम्बरको सुमो उदयपुरको ठाँटी भन्ने स्थानमा रहेको भीरबाट ३ सय मिटर तल खस्दा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरले जनाएको छ ।
मृत्यु हुनेहरुको सनाखत भइसकेको छैन ।
घाइतेहरुको स्थानीय कटारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
घटनास्थलमा अहिले थप प्रहरी फोर्ससहित ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीयवासी भेला भएर भिरमा अड्केका शव निकाल्ने प्रयास